नेपाली कामदारलाई कोरोनाविरुद्धको खोप निःशुल्क - संदेश पत्र
२०७७ माघ १२, सोमबार (५ महिना अघि)
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न देशमा कार्यरत नेपाली कामदारलाई रोजगारदाता देशले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप निःशुल्क प्रदान गर्ने भएका छन् ।
कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप प्रयोगमा आउँन थालेपछि आप्रवासी श्रमिक आपूर्ति गर्दै आएका रोजगारदाता देशले निःशुल्क खोप लगाउने घोषण गर्न थालेका छन् । यसको फाइदा वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत नेपाली कामदारहरुले पनि लिन पाउँनेछन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली कामदार जाने प्राय सबै देशले कोरोनाविरुद्धको खोप निःशुल्क प्रदान गर्ने घोषण गरेका छन् । हाल भारतबाहेकका वैदेशिक रोजगारीमा करिब ४२ लाख नेपाली कामदार कार्यरत रहेको सरकारी अनुमान छ ।
दक्षिण कोरिया सरकारले त्यहाँ कार्यरत सबै विदेशी कामदारलाई कोरोनाविरुद्धको खोप निःशुल्क प्रदान गर्ने भएको छ ।
दक्षिण कोरिया रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम विभागका प्रमुख जुङ्ग इयुन क्युङले गत सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप कोरियामा रहने सम्पूर्ण स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकलाई निःशुल्क प्रदान गर्ने जानकारी दिएका छन् । यससँगै ५० हजारभन्दा बढी नेपालीले कोरिया सरकारले प्रदान गर्ने कोरोनाविरुद्धको खोप निःशुल्क पाउने भएका छन् ।
यस्तै जापान सरकारले पनि स्वदेशी नागरिकलाई जस्तै रोजगारीका लागि आएका विदेशी कामदारलाई पनि कोरोनाविरुद्धको खोप निःशुल्क लगाउन रोजगारदाता कम्पनीलाई आग्रह गरेको छ ।
जापान सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोप विदेशी कामदारका हकमा निःशुल्क लगाउने घोषणा अघिल्लो साता नै गरिसकेको छ । जापानमा करिब ७० हजार नेपाली अध्ययनसँगै रोजगारीमा कार्यरत रहेको सरकारी अनुमान छ ।
यसैगरी युरोपका देशले पनि रोजगारीका लागि आएका विदेशी कामदारहरुलाई कोरोनाविरुद्धको खोप निःशुल्क प्रदान गर्ने घोषण गरिरहेका छन् । पोल्याण्ड, पोर्चुलग, सेल्सेस, रोमनिया, नर्वेलगायतका युरोपेली देशले रोजगारीका लागि तेस्रो देशबाट आएका कामदारलाई कोरोनाविरुद्धको खोप निःशुल्क लगाउने घोषण गरिसकेका छन् ।
युरोपका विभिन्न देशमा करिब २ लाख नेपाली कामदार रोजगारीमा कार्यरत रहेको सरकारी अनुमान छ ।
नेपाली कामदारहरु सबैभन्दा धेरै कार्यरत खाडीका देशले पनि विदेशी कामदारलाई कोरोनाविरुद्धको खोप निःशुल्क लगाउन पहल सुरु गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा धेरै नेपाली कार्यरत कतार, साउदी अरब, यूएई, ओमन, कुवेत, बहराइन, जोर्डनलगायत खाडी देशले आप्रवासी श्रमिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप निःशुल्क प्रदान गर्ने भएका हुन् ।
यी देशमा कार्यरत नेपाली कामदारलाई कोरोनाविरुद्धकको खोप निःशुल्क लगाइने नेपाली कूटनीतिक नियोगहरुले जानकारी दिएका छन् ।
कतार सरकारले पनि रोजगारीका लागि आएका विदेशी कामदारलाई कोरोनाविरुद्धको खोप निःशुल्क लगाउने घोषण गरेको छ । कतारमा ३ लाख ९० हजारभन्दा धेरै नेपाली कार्यरत छन् । कतारमा कार्यरत नेपालीलाई त्यहाँको सरकारले निःशुल्क खोप प्रदान गर्ने कतारस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।
यूएईले कोरोनाविरुद्धको खोप आँफैले विकास गरिरहेको छ । यूएईले पनि रोजगारीमा कार्यरत विदेशी श्रमिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप निःशुल्क प्रदान गर्ने घोषण गत महिना नै गरेको थियो । यूएईमा ४ लाखभन्दा धेरै नेपाली कामदार कार्यरत छन् । यूएईले निःशुल्क प्रदान गर्ने कोरोनाविरुद्धको खोपबाट नेपाली कामदारले लाभ लिन पाउने भएका छन् ।
यसैगरी धेरै नेपाली कार्यरत रहेको साउदी सरकारले पनि विदेशी कामदारलाई कोरोनाविरुद्धको खोप निःशुल्क प्रदान गर्ने भएको छ । साउदी सरकारले साउदीमा रहेका स्वदेशी तथा विदेशी सबैलाई कोरोनाविरुद्धको खोप नि:शुल्क लगाउने घोषण गरेको हो । साउदीमा ५ लाखभन्दा धेरै नेपाली कार्यरत छन् ।
कुवेत, ओमन, बहराइन र जोर्डनले पनि रोजगारीमा आएका विदेशी श्रमिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप निःशुल्क प्रदान गर्ने भएका छन् । यी देशमा १ लाख ५० हजारभन्दा धेरै नेपाली कार्यरत छन् ।
त्यस्तै मलेसिया सरकारले पनि विदेशी कामदारलाई कोरोनाविरुद्धको खोप निःशुल्क लगाउने घोषण गरिसकेको छ । मलेसियामा कार्यरत विदेशी कामदारलाई विभिन्न चरणमा खोप प्रदान गर्न भएको हो । मलेसियामा ५ लाखभन्दा धेरै नेपाली कार्यरत छन् । मलेसियाका कतिपय रोजगारदाता कम्पनीले कम्पनीमा कार्यरत कामदारलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरेका छन् ।
भारतसहित अन्य देशमा करिब ७० लाख नेपाली रोजगारीमा कार्यरत रहेको सरकारी अनुमान छ । सबैभन्दा धेरै नेपाली भारतको विभिन्न शहरमा रोजगारीका लागि जाने गरेका छन् ।
भारतमा यति संख्यामा नेपाली कामदार कार्यरत छन् भन्ने तथ्यांक नभए पनि त्यहाँ करिब १७ लाख नेपाली कार्यरत रहेको सरकारी अनुमान छ ।
नेपाली कामदार संस्थागत १ सय १० र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर १ सय ७२ देश वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकमा छ ।
रोजगारीका लागि भारतबाहेकका देशमा ४२ लाख नेपाली कार्यरत रहेको विभागको तथ्यांक छ । कोरोना भाइरसको महामारीमा समेत ७० हजार नेपाली कामदार रोजगारीको खोजीमा विभिन्न देश पुगेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
UV-C radiation does not reach earth because it is absorbed by oxygen and ozone from the atmosphere, so it does not cause damage. newzealandrx.com UV-B radiation is partially absorbed by ozone and reaches the surface of the earth, causing skin damage.
Cialis acheter cialis générique cialis. Canada cialis. online casino Acheter Cialis Docteur en ligne.